Isitudiyo esiseBeachfront kunye neRothbar Puppy Park - I-Airbnb
Isitudiyo esiseBeachfront kunye neRothbar Puppy Park
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRande
Wamkelekile kwiBeachfront Studio kunye neRothbar Puppy Park kwisiXeko esihle saseCrescent, CA.
Ifakwe kakuhle intuthuzelo yakho kunye nesimbo soLwandlekazi lwePasifiki engqondweni, iBeachfront Studio inegumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela elinye elinebhedi ekhululekileyo elingana nokumkanikazi, i-futon / ibhedi ephumla ngokulinganayo enobungakanani obuphindwe kabini, isofa enkulu kunye ne-open- Igumbi lokuhlala / ikhitshi / igumbi lokutyela / igumbi lelanga elinomabonakude othe ngqo kunye nokufikelela kwi-Intanethi ngaphandle kwamacingo.
Le ndlu inekhitshi elikhulu elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokuhlambela lineshawa ehlaziyiweyo kutshanje kwaye unokufikelela kwigumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela eyi-1/2. Ipropathi ibekwe kwiPebble Beach Drive, enemibono yolwandle engenakuthelekiswa nanto ukusuka kwipropathi okanye ungqengqe ezantsi elunxwemeni- umgama nje omfutshane we-1/2!
Nangona kunjalo, okona kulungileyo kuko konke umbono omangalisayo woLwandlekazi lwePasifiki. Ngokuthe ngqo phambi kwakho kukho indawo enengca enetafile kunye nezitulo ukonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo, iimayile kunye neemayile ezinzulu zolwandle oluluhlaza kunye neemfumba zolwandle apho unokuhlala ubone iminenga efudukayo kunye nabakhenkethi abahambahambayo.
Ngasemva kweyadi kukho indawo enomhlaba elungiselelwe iintsana zakho ezinoboya ebhodweni kwaye ixhotyiswe ngezitulo, umgodi ophathwayo womlilo kunye nerhasi yerhasi. Ngokuthe ngqo emva kweyadi yethu engasemva, sinesinye isiqwenga sepropathi esiyibiza ngokuba yiRothbar Puppy Park. Ipaki yenjana imalunga ne-1/2 yehektare ebiyelwe ngokupheleleyo, inegadi encinci kunye nengca eninzi kunye nokwenziwa ukuze iinjana zakho ziphonononge kwaye zonwabe. Ngaphakathi kwipaki yenjana kukho i-puppy spa ye-10x12 ft enamanzi afudumeleyo kunye nombane wokuhlamba kwaye womise abahlobo bakho abanemilenze emi-4 emva kwe-romp elunxwemeni. Sivumela izinja kuphela, akukho zikati.
Ukongeza kwezi ndawo zintle zokuhlala, istudiyo sam sobugcisa sidibana nendlu yesitudiyo. Ndisebenzisa esi studio kwiiklasi zobugcisa kunye nokwenza ubugcisa obahlukeneyo obubandakanya ukupeyinta isilika, iglasi edityanisiweyo kunye nemosaics. Unokwenza amalungiselelo okuthatha inxaxheba kwiiklasi ezahlukeneyo zobugcisa ngentlawulo eqhelekileyo.
Le ndlu ikwisitrato sokuhlala kunye namakhaya ajonge iPasifiki. Unokonwabela ukuhamba esitratweni (kunye nolwandle) okanye unokufikelela elunxwemeni malunga neeyadi ezili-100 ukusuka ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Rande
Ujoyine nge- 2011 Novemba
I am a retired school psychologist whose current passions include art, traveling and our loving Cavalier King Charles spaniels. My husband and I enjoy the our home and friends and…
Ndiza kudibana nawe xa ufika kuqala ukuze ndikuqhelanise nendlu yakho, ipaki yenjana kunye neendawo onokuthi uzindwendwele.